Mifantoka Be Loatra Amin’ny Bikako ve Aho? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kachin Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Ossète Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tetun Dili Tiorka Tseky Tsonga Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
MANONTANY NY TANORA HOE
Fantaro raha lasa tafahoatra ilay izy.
Nahoana no tsy tiako ny bikako?
Tokony hovako ve ny paoziko?
Tena te ho tsara ve ianao?
Iza amin’ireto no tena tsapanao?
Tsy mety tiako mihitsy ny paoziko.
Mba tiako ihany ny paoziko indraindray.
Mety amiko foana ny paoziko, tsy mampaninona ahy.
Inona no tena tianao hovana?
Fenoy ny banga.
Tsy tiako maizina ny bikako, indrindra...
isaky ny avy milanja aho.
isaky ny mijery fitaratra aho.
isaky ny mampitaha ny tenako amin’olona (namana, mpanao filma, mpilatro) aho.
Ratsy bika be aho. (“Matavy be sy ratsy tarehy ny fahitako ahy eo amin’ny fitaratra. Nisy fotoana aza aho efa tsy nisakafo mihitsy mba hihena.”—Serena.)
Tsy dia tsara aho fa tsy mampaninona. (“Tsy maintsy hoe misy zavatra tsy tianao foana amin’ny tenanao nefa tsy azonao ovana. Aza ivakiana loha fotsiny ilay izy.”—Natanya.)
Milaza ny Baiboly fa tsy mety ny mihevi-tena “mihoatra noho izay tokony hoheverina.” (Romanina 12:3) Midika izany fa tokony hieritreritra ny tenanao ihany ianao, saingy tsy atao tafahoatra. Mila mikarakara ny tenanao àry ianao, ohatra hoe miborosy nify sy manao madio tsara.
Ahoana anefa raha kivy foana ianao noho ny bikanao, ka lasa izany foana no eritreretinao? Diniho izao:
‘Nahoana no tsy tiako ny bikako?’
Mety ho ireto ny anton’izany:
Tele sy boky ary Internet. “Sarin’olona mahia kely foana no hitanao, dia lasa mieritreritra ianao hoe tokony ho hoatr’izany koa ianao raha te ho manja. Fa raha vao tsy mitovy amin’ireny ianao, dia hoatran’ny hoe ratsy be!”—Kellie.
Ray aman-dreny. “Raha vao mieritreritra bika sy tarehy foana ny reniny, dia lasa hoatr’izany koa ny zanany vavy. Fa na ny ankizilahy koa aza misy manao an’izany, raha hoatr’izany ny dadany.”—Rita.
Mihevi-tena ho tsy misy dikany. “Misy olona tsy matoky tena mihitsy raha tsy mandokadoka azy ny hafa. Mahakamo be ny miaraka amin’ny ankizy hoatr’izany.”—Jeanne.
Eritrereto àry hoe...
‘Tokony hovako ve ny paoziko?’
Izao no nolazain’ny tanora sasany:
“Tsy azonao ovana daholo izay zavatra tsy tianao amin’ny tenanao, fa aleo tonga dia tsy raharahaina fotsiny. Mety tsy ho tsikaritry ny olona akory ilay izy, raha ohatra ka tsy eritreretinao be.”—Rori.
“Ataovy fotsiny izay hahasalama anao. Lasa mba metimety tsara manko ianao rehefa salama. Sady tsy tena namana koa ny olona iray raha ny paozinao no tena jereny (fa tsy mba ny toetranao).”—Olivia.
Tadidio àry izao: Manaova metimety nefa aza dia miasa saina be loatra amin’ny paozinao, satria mety hisy vokany ratsy izany. (Jereo ny “ Tantaran’i Julia.”)
Raha mahay mandanjalanja koa ianao, dia ho hitanao ihany hoe hay mba misy tsara ihany aminao. Hoy ny ankizivavy iray atao hoe Erin: “Tsy hoe tiako be foana aloha ny bikako e. Fa hitako hoe rehefa mifantoka be amin’izay ratsy amin’ny tenako aho, dia lasa mieritreritra hoe hay ity izaho ity tena ratsy be. Aleoko manao spaoro sy misakafo tsara fotsiny, dia mety ho azy ny ambiny!”
Raha tsy miferinaina be amin’izay paozinao ianao, dia hahatsapa hoe metimety. Ary na ny mijery anao aza mahafinaritra. Ireto misy torohevitra tsara avy ao amin’ny Baiboly:
Aza mitady ny tonga lafatra. “Aleo mifaly amin’izay ananana, toy izay mitady ny tsy hita. Tsy misy dikany mantsy izany fa toy ny manenjika rivotra fotsiny.”—Mpitoriteny 6:9, Dikan-teny Anglisy Maoderina.
Manaova spaoro amin’ny antonony. “Mahasoa kely ihany ny fampiasan-tena”—1 Timoty 4:8.
Ny toetranao no hatsarao. “Ny olona mijery izay hitan’ny maso, fa i Jehovah kosa mijery ny fo.”—1 Samoela 16:7.
“Tonga dia hita amin’ny tarehinao raha miferinaina ianao na tsia. Raha matoky tena ianao dia voamariky ny olona izany, dia lasa mahafinaritra azy ny miaraka aminao.”—Sarah.
“Mety hoe taitra kely amin’ny tarehinao ny olona raha manja ianao, fa ny toetranao anefa no tena ho tadidiny.”—Phylicia.
Jereo koa ny Ohabolana 11:22; Kolosianina 3:10, 12; 1 Petera 3:3, 4.
Tsy tiako mihitsy ny habeko tamin’izaho 16 taona. Izaho aloha tsy ngezabe nefa tsy nahia koa, fa hoatran’ny botabota. Nihevitra aho hoe raha mba mahia kely aho izao dia mba tian’ny ankizilahy. Dia zara raha nisakafo aho.
Lasa nahia kely tokoa aho, nefa narary avy eo. Sitrana ihany aho tatỳ aoriana, saingy ny foko sy ny saiko no lasa nikorontana, ary misy fotoana aza aho mbola tsy te hihinana n’inona n’inona mihitsy. Fa efa tsy mampaninona ahy intsony aloha izao ny bikako e. Miezaka misakafo tsara sy manao spaoro koa aho, dia izay. Rehefa tezitra amin’ny tenako anefa aho indraindray, dia tsy misakafo mihitsy.
Mba tiako holazaina amin’ny tanora hafa hoe aza mivaky loha be amin’ny tenin’olona, satria samy manana ny heviny ny olona. N’inona n’inona paozinao eo, dia hisy foana hieritreritra hoe tsara ianao, nefa tsy maintsy hisy hiteny koa hoe tsy tsara ianao. Ataovy fotsiny izay hahasalama anao. Izany no tokony hampirisihan’ny namanao anao, raha tena tia anao izy.
Fantaro hoe ahoana no hialana amin’ireo fandrika telo mpahazo ny tanora eo amin’ny resaka lamaody.
Hizara Hizara Mifantoka Be Loatra Amin’ny Bikako ve Aho?
ijwyp no. 15
Ny Hevitry ny Tanora Momba ny Bika Aman’endrika